Semalt Inopa Iwe Mamwe Mazano Okudzivirira Virus neMarware
Malware inoreva software yakaipa iyo inoshungurudza kushanda kwekombiyuta uye mushumiri. Kune mhando dzakasiyana dzemarware, semuenzaniso, spyware, utachiona, Trojan, uye minye.
Michael Brown, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutungamiri, akagadzirira nzira dzinotevera dzinoshandiswa nevashandisi kuti vadzivirire kombiyuta yavo kubva kune zvinorwarisa malware - computer support in beaverton or.
Kukanganisa Kunobatsira Sei Makombiyuta
Anoshungurudza anoshandisa internet kuti aparidze malware. Anoshandisa software kushungurudza kuti abvumira kushandiswa kwevashandi vari kure.
Iyo malware inopararira kuburikidza nehutachiwana hwehutachiona hwehutachiwana.
Mamwe mawebhusayithi ane malware anowanika kamwe chete kana achitsvaga internet.
Mamwe mapurogiramu e-malware akavanzwa muCD uye software. Vanopinda kombiyuta panguva yeCD kana software yekugadzira chirongwa.
Malware anogona kupararira achishandisa floppy disks uye USB key.
Mamwe mapurogiramu e-malware anokonzera kombiyuta. Mushure mezvo, iyo malware inopararira kuburikidza neInternet kurwisa email, mawebsite, uye masangano evanhu.
Vanhu vane pakombiyuta pamusha vanofanira kushandisa zvinyorwa zvishoma. Nhamba yakaderera haigone kuisa software isina kubvumirwa paunenge uchiongorora internet. Nhoroondo imwe inofanira kuva yehutungamiri. Kunyange zvakadaro, dzimwe nhoroondo dzevashandi dzinofanira kunge dzisingakwanisi.
Shandisa Hardware Router
Routerre routerta inodzivirira kusvibiswa kwemajairira kure nekutengesa internet..Iyo router iri pakati peikamera modem inopiwa nevashandi vepainternet uye kombiyuta. Makambani anotengesa routers anosanganisira Netgear uye Linksys. Iyo hardware router inobvumira makombiyuta akawanda kuti agovere internet connection. Iyo ma routers ane moto wokudzivirira moto kuti kudzivirira kombiyuta kurege kuona kunze uye kusachengeteka mamiriro ekunze.
Mapurogiramu epakombiyuta ane zvikwata kana zvikanganiso zvinowedzera kusvibisa kwemarware. Zvimwe zvirongwa zvinoshandiswa izvo vanopikisa vanogona kushandisa kuti vashandise kombiyuta. Maofisi e-Software anobudisa zvinyorwa zvinotarisirwa kugadzirisa zvinoshandiswa uye chirwere chinetso. Saka, saka, zvakakosha kune vashandisi kuisa mapeji ekuvandudza software. Software yakadai seWindows uye Firefox inogara ichizivisa vashandisi nezvezvinhu zvinowanikwa zviripo.
Pirated software inoshandiswa pasina mvumo kana kugamuchirwa kweproducer software. Microsoft inokurudzira vanhu kuti vasashandise software yepirated kuburikidza ne "Windows Genuine Advantage" platform. Windows inotarisa kuvimbika kwe software kuburikidza nekodhi yekodhi. Kuiswa kwe software kunofadza. Zvisinei, makombiyuta asina purogiramu haagoni kuwana zvirongwa zvekuchengetedza zvinokosha kubva kumasevhisi eMicrosoft. Kusava nekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuchengetedza kunoita kombiyuta kunetseka pamatambudziko ekurwiswa kwe-malware.
Iva Nehanya Nezvimwe Zvinyorwa Zvitsva uye Zvirongwa
Malware kurwisa kunogona kuitika kana munhu anoshandisa zvinyorwa zvisiri izvo. Zvinokurudzirwa kubvisa zvinyorwa zvisinganzwisisiki zve email zvinosanganisira mifananidzo isina kutarisirwa nemagwaro. Suspicious software downloads inofanirawo kudziviswa. Dzimwe pirated software inokonzera kombiyuta neTrojan uye utachiona panguva yekudzikunura kana kushanda. Mushandisi anofanira kutora mapurogiramu kubva panzvimbo dzakarurama dzakachengeteka.
Sarudza Pasi Pasiwedi
Malware nevanopikisa vanogona kuwanika makombiyuta uye maakaiti e-internet ane mapepa emazwi anozivikanwa kana zviri nyore kutaurira. Vashandi vanofanira kukura mapepa emafaira asingakwanisi kufanotaurwa nevanhu vasingabvumirwi kana mapurogiramu. Vashandi vanoodzwa mwoyo kubva kushandisa imwe password kuti vawane dzimwe makombiyuta emakombiyuta kana mapurogiramu. Kana vanorwisa kana malware vachibudirira kuwana purogiramu yemakombiyuta vachishandisa password, vachaedza kuwana mamwe mazano ehurumende vachishandisa mashoko mamwechete epa password.